Amerika Latina · Aogositra, 2012 · Global Voices teny Malagasy
Amerika Latina · Aogositra, 2012
Tantara mikasika ny Amerika Latina tamin'ny Aogositra, 2012
Venezuela : Ambony Ambany Ny Tao Amuay Taorian'ny Fipoahana Toby Fanadiovan-tsolika
Venezoela 26 Aogositra 2012
Nipoaka tamin'ny 1 ora maraina ny sinibe iray, ny 25 Aogositra teo, tao amin'ny toby fanadiovan-tsolika ao Amuay à Judibana, dans l'Etat de Falcón any Venezuela .
Brezila 25 Aogositra 2012
Però 24 Aogositra 2012
Costa Rica 23 Aogositra 2012
Tamin'ny hery sy fahasahiana, no nanoratan'i SophiadelSol bilaogeran'ny Love Fashion & Vintage ny fakàna an-keriny taminà fiara nanjo azy vao haingana, fangalarana sy fanolanana raha nivoaka alina niaraka tamin'ny sipany izy. Ao amin'ny fiaraha-monina izay miampanga ireo niharam-boina ho manolotra ny tenany ho amin'ny loza, halatra ary ireo zavatra hafa mety hiseho, mijoro misolo tena ireo niharam-boina ireo izy ary mametraka ny hadisoana amin'ny fiaraha-monina izay mamela ireny zavatra ireny hitranga.
Kolombia: 13 Taona Taorian'ny Namonoana An'i Jaime Garzón
Kolombia 20 Aogositra 2012
Nisy namono tamin'ny 13 aogositra 1999 ny mpanao gazety, mpahay lalàna ary mpandala ny fandriampahalemana Kolombiana Jaime Garzón Teloambinifolo taona taty aoriana mbola tsy voavaha ny raharaham-pamonoana an'i Garzón. Mahatsiaro an'i Garzón ny Kolombiana ary mitaky ny rariny isaky ny andro ahatsiarovana ny namonoana azy.
Paragoay: Tolona Sy Fandrahoana Mahazo Ny Tanin'ireo Teratany Aché
Paragoay 20 Aogositra 2012
Noheverina ho iray volana fitàran'ny firavoravoana ny volana Aogositra taorian'ny namindràn'ny governemanta Paragoaiana tany eo amin'ny 4600 hektara tamin'ny tanindrazany naverina tamin'ny vondrom-piarahamonin'ireo Aché ao Kuetuvy. Kanefa, mbola misy fifandirana ifanaovana amin'ireo vondrona tantsaha izay milaza fa tokony notapahana tamin' ity tany ity no nanembantsembana ity fotoam-piraovravoana ity.
Meksika: Manao Amboradara Ho Amin'ny Fandriampahalemana
Meksika 19 Aogositra 2012
Miaraka manatontosa ny amboradaran'ny Fandriampahalemana any amin'ny tanàna tahaka an'i Guadalajara, Monterrey ary Mexico City, ny lehilahy sy ny vehivavy avy amin'ny sokajin-taona rehetra hametaka ny anaran'ireo niharan'ny herisetran'ny Ady amin'ny Rongony amina mosoara fotsy.
“Don't Fear the Internet”: Ny Tetikasan'ny Voto Ciudadano, Shily
Shily 18 Aogositra 2012
Ny "Don’t Fear the Internet" [es], tetikasa mikatsaka ny hanasongadina ny lanjan'ny fahalalahana miteny ao anaty aterineto, dia mifantoka amin'ny raharaha "Voto Ciudadano" (Safidim-bahoaka), sehatra fiadian-kevitra izay manome fahafahana ny vahoaka hisafidy amin'ireo olana maro samihafa.
Manome Fialokalofana An'i Julian Assange Mpanorina Ny WikiLeaks i Ekoatera
Angletera 17 Aogositra 2012
Taorian'ny fiandrasana ela, nanambara i Ekoatera fa hanome fialofana ara-politika an'i Julian Assange mpanorina ny WikiLeaks. Ao amin'ny masoivohon'i Ekoatera ao Londona i Assange amin'izao fotoana. Naresaka be ny Twitter niaraka tamin'ireo fanehoan-kevitry ny olon-tsotra sy ireo mpifanandrina mivantana amin'ity raharaha ity, toa ny WikiLeaks, Julian Assange, ary ny Birao Britanika misahana ny Raharaham-Bahiny sy ny Tany mampiasa na miteny Anglisy "Commonwealth".
Nahatratra Vokatra Manatantara i Kolombia Tamin'ny Olaimpika Londra 2012
Kolombia 15 Aogositra 2012
Vaovao farany (9 Aogositra 2012): Fotoana fohy taorian’ ny namoahana ity lahatsoratra ity, nandrombaka ny medaily faha enina ho an’i Kolombia i Jackeline Rentería tamin’ny lalao Olaimpika ao Londra 2012. Medaily alimo no azon’i Rentería tamin’ny taranja tolona. Teo amin’ny tantaran’i Kolombia momba ny Lalao Olaimpika, ny lalao tao Londra tamin’ity taona 2012 ...